လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှု ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှု - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ (2018) - Porn တွင်သင့် ဦး နှောက်
ဂျော့ခ်ျ, Manju, Shreemit Maheshwari, Suhas Chandran, Suman အက်စ် Rao က, ဂျေ Shivanand Manohar နှင့် TS Sathyanarayana Rao က။
စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အိန္ဒိယဂျာနယ် 60 မရှိ။ 8 (2018): 510 ။
စွဲလမ်းတ္ထုများပိုလျှံစားသုံးမှုများအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းပြဿနာကမမှန်အစာစားခြင်းနှင့်တူအပြုအမူတွေ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, ကွန်ပျူတာစွဲနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူရောဂါဗေဒအတွက်အဆက်မပြတ်အဘို့မသာဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ထားအမူအကျင့်စွဲလမ်းများအတွက်တရားဝင်မှုနှင့်အတူထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှစွဲအပါအဝင်လိင်စွဲကြောင့်ဒီဧရိယာ၌ခိုင်ခံ့သောပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုမရှိခြင်း၏သီးခြား entity အဖြစ်ထည့်သွင်းမထားပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောအကြေးခွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏အကဲဖြတ်ဘို့သုံးနိုင်တယ်။ ထူထောင်အဖြေရှာတဲ့စံတစ်ခုမရှိခြင်းလည်းမရှိကတည်းကဤအကြေးခွံများတရားဝင်မှု၏အရေးပါမှုကိုသံသယဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြေးခွံထဲမှာမေးခွန်းတွေအများအပြားဟာအဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံခဲ့သည်သို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်လိုက်လျောပါဘူး။ Pharmacotherapy အတူတကွ psychotherapy အတူက, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents ၏အခန်းကဏ္ဍကို synthesize လက်ရှိစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, ဒုစရိုက်ဖြေလျော့ချနှင့်လူမှုရေးညှိနှိုင်းမှုတိုးတက်လာဖို့ရန်ကူညီပေးသည်ကဲ့သို့သောလူနာအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုရှိသည်ဖို့ထေူ၏။
keywords: အမူအကျင့်စွဲ, လိင်စွဲလမ်း, အင်တာနက်စွဲလမ်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဝင်
ဂျော့ခ်ျက M, Maheshwari S က, Chandran S က, Rao ကအက်စ်အက်စ်, Manohar JS, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဘို့ Sathyanarayana Rao က T ကအက်စ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ အိန္ဒိယ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2018; 60, ပျော့ပျောင်း S2: 510-3
လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက် George M၊ Maheshwari S၊ Chandran S, Rao SS, Manohar JS, Sathyanarayana Rao T အက်စ်။ အိန္ဒိယ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု [အမှတ်စဉ်အွန်လိုင်း] 2018 [ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 ရက် 10 ကိုးကား]; 60, ပျော့ပျောင်း S2: 510-3 ။ မှရနိုင်သည် http://www.indianjpsychiatry.org/text.asp?2018/60/8/510/224695
စွဲအကျိုးကို, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်သော circuitry လှုံ့ဆော်သောဦးနှောက်၏မူလတန်းနှင့်နာတာရှည်အခွအေနေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ စွဲလမ်းဆေးပညာ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတ္ထုများနှင့်အပြုအမူနှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းရန် 2011 ၌ဤအဓိပ်ပါယျကိုပေး၏။ အဆိုပါဝေါဟာရကို "စွဲ" အများအားမူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်အရက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲ, ထိုကဲ့သို့သောပုံမမှန်မစားအဖြစ်ပြဿနာအပြုအမူတွေ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, ကွန်ပျူတာစွဲနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်အတူရောဂါဗေဒအတွက်အဆက်မပြတ်နဲ့တူတ္ထုများ၏ထိန်းအကွပ်မဲ့စားသုံးမှုမှလျှောက်ထားသည်။ ဒီအပြင်အများကြီးအာရုံကိုဖမ်းထားပြီးဖြစ်သောအခြားထွန်းသစ်စစွဲလမ်းသိသိသာသာ functional-လူမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောညစ်ညမ်းမှစွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါဗေဒပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအပြုအမူတွေအားဖြင့်ဆုလာဘ်နှင့် / သို့မဟုတ်သက်သာဖြစ်စေလိုက်ရှာသူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ အလားအလာလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာဆုလာဘ် circuitry ထိခိုက်အပြုအမူတွေကအနည်းဆုံးအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲလမ်း၏အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ လေ့လာရေးအပြုအမူစွဲအတွက်နောက်ခံအာရုံကြောဖြစ်စဉ်များပစ္စည်းဥစ္စာစွဲအလားတူဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိစာပေနှင့်သုတေသနအမူအကျင့်စွဲနေတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုစေနိုင်ဖို့အတွက်သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းလူမှုရေးဆက်ဆံရေးအတွက်, သို့မဟုတ်အခြားလူမှုရေးအခြေအနေများတွင်, အလုပ်မှာလက်ရှိဖြစ်ရပါမည်ကြောင်းအလေးအနက်။ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကအရေအတွက်အားအပြုအမူစှဲ passive (ဥပမာရုပ်သံ) သို့မဟုတ်တက်ကြွစွာ (ဥပမာကွန်ပျူတာဂိမ်း) ဖြစ်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်နှင့်များသောအားဖြင့်စွဲလမ်းသဘောထားတွေ၏မြှင့်တင်ရေးကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအရာ inducing နှင့်အားဖြည့် features တွေပါဝင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှ Kimberly လူငယ်တို့အားဖြင့်စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်အဖြစ်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုကိုပထမဆုံးအိုင်ဗင် Goldberg, 1995 တစ်ဦးက New York စိတ်ရောဂါနှင့်အသုံးအနှုန်းအားဖြင့်အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုမှီခိုအများဆုံးဂန္စွဲမော်ဒယ်များတစ်ပြုပြင်ထားသောမူအရအပေါ်လုပ်ကိုင်သောအမူအကျင့်စွဲ, အဖြစ် conceptualized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 'အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု'၊ 'အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုရောဂါ'၊ 'ရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း' နှင့် 'compulsive Internet Use' တံဆိပ်များကိုအလားတူအယူအဆအားဖြင့်ဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ အင်တာနက်သုတေသနနယ်ပယ်တွင်စခန်း ၂ ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ ၂။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုခံစားနေရသူများသည်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တည်ရှိနိုင်သောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူများသို့မဟုတ်ငွေကြေးသို့မဟုတ်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပုံစံများပေါ်တွင်အမှန်တကယ်မှီခိုနေရသည်။ သုတေသီများသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအားသီးခြားစီအဖြစ်သံသယ ၀ င်မှုနည်းပါးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အလမ်းတိုးတက်မှုရှိ၊ မရှိ၊
ညစ်ညမ်းကိုလည်းအမူအကျင့်စွဲ၏အခြားပုံစံအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ ဒါဟာယောက်ျားလေးလိင်အကြောင်းကိုသိကြများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ချထားသော, စိတ်ကူးနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုတစ်ဦးနားလည်မှုအောင်မြင်ရန်ရပထမဦးဆုံးရာအရပ်ဖြစ်ဆိုပါတယ်။ တစ်ဦးက MSNBC.com အားဖြင့် 2004 အတွက်ကောက်ယူစစ်တမ်းနှင့် Elle မဂ္ဂဇင်း 15,246 ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကယောက်ျားသုံးစတုတ္ထသူတို့ကအင်တာနက်ကနေခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်အမျိုးသမီးလူဦးရေရဲ့ 41% အဖြစ်ကောင်းစွာပြု၏ဟုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းဖြောင့်ရှေ့ကိုလွယ်ကူအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ ဒါဟာဆယ်ကျော်သက်အစစ်အမှန်လောကရှိရင်ဆိုင်ရကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီပြီး၏ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခိုလှုံရာပေးပါသည်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းညစ်ညမ်းဆီသို့ဦးတည်လှည်နှင့်တကွ, သူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်လိင်ဘဝအသက်တာ၌သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်တည်ဆောက်လမ်းကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲနေသည်။ အတော်များများကလေ့လာမှုများဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့် ပတ်သက်. ကမ္ဘာတစ်လွှားကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဝေါဟာရကိုစွဲ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်ရောဂါများ 10 (ICD10) အတွက် (DSM) စတုတ္ထ Edition ကို, စာသားတည်းဖြတ်မူသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေးတွင်ပေါ်လာပါဘူး: "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ" ၏တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများဖော်ပြထားခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်မကိုက်ညီသည့်အတွက်လည်းမရှိ မတူညီတဲ့သုတေသီများပေးစံ။ DSM-5 လိင်စွဲလမ်းမပါဝင်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာပင်ကိုယ်မူလသုတေသနဒီဧရိယာ၌ခိုင်ခံ့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတည်ပြုသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု. အဘယ်သူမျှမတနိုင်ငံလုံးကိုကိုယ်စားလှယ်ပျံ့နှံ့စစ်တမ်းများရှိခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသော data တွေကိုကမ္ဘာကြီးကိုဖြတ်ပြီးစံနှင့်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း၏ defining features တွေ, ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ရရှိသောပြီသည်အထိယခု DSM-5 ၏နောက်ဆက်တွဲတွင်ထည့်သွင်းထားတဲ့အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder ဆင်တူ, လိင်စွဲထည့်သွင်းမရပါ။ သုတေသီများဤအရပ်မှလိင်စွဲနောက်ဆုံးမှာ DSM ၏အနာဂတ် edition မှာသို့လုပ်ထားခြင်းပင်လျှင်, အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ၏ Sub-အမျိုးအစားထက်သီးခြား entity တဦးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အေတစ် 12 လကာလအတွင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသုံးစံ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံး:
တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ Impulses သတင်းပို့ခုခံတွန်းလှန်ရန်မှုများထပ်တလဲလဲကျရှုံး။
မကြာခဏရည်ရွယ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာသို့မဟုတ်ရှည်ကြာချိန်ဤအပြုအမူအတွက်ပါဝငျ။
persistent ဆန္ဒသို့မဟုတျ, ရပ်တန့်ဖို့လျှော့ချရန်, သို့မဟုတ်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့မအောင်မြင်အားထုတ်မှု။
, လုပ်ငန်းခွင်ပညာရေးဆိုင်ရာ, ပြည်တွင်း, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးတာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းရန်မျှော်လင့်သည့်အခါမကြာခဏအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး။
အပြုအမူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားသော persistent သို့မဟုတ်မှုများထပ်တလဲလဲလူမှုရေး, ဘဏ္ဍာရေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိခြင်း၏အသိပညာရှိနေသော်လည်းအပြုအမူများဆက်လက်။
တူညီသောပြင်းထန်မှုအဆင့်, ကြိမ်နှုန်းအရေအတွက်, ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်မှာဆက်လက်အပြုအမူတွေအတူလိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ပြင်းထန်မှု, ကြိမ်နှုန်းအရေအတွက်, သို့မဟုတ်အပြုအမူများ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တက်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်, လူမှုရေးလုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများကန့်သတ်။
ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ, စိုးရိမ်စိတ်, အညစ်, ခြင်းဟာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းပါ။
ခ (ဥပမာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, အလုပ်အကိုင်, ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေရေးရာသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးကဲ့သို့) သိသာထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူမှုရေးအကျိုးဆက်များရှိထားသည်။
DSM III ကို R ကိုဆင်တူတဲ့ပုံစံ Goodman 1990 နေဖြင့်အဆိုပြုအဖြစ်အမူအကျင့်စွဲဘို့ diagnostic စံ:
သတ်မှတ်ထားတဲ့အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ Impulses သတင်းပို့ခုခံတွန်းလှန်ရန်မှုများထပ်တလဲလဲပျက်ကွက်။
လျှော့ချရန် (1) ကအမူအကျင့်နှင့်အတူပါသို့မဟုတ်အပြုအမူ (2) အားကြိုတင်ကြောင်းကိုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူမကြာခဏအတွက်အဆက်မပြတ်မကြာခဏကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ထက်ပိုရှည်ကာလအတွင်းအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး (3) ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအောက်ပါအနည်းဆုံးငါးဦး , ထိန်းချုပ်မှုပါသို့မဟုတ်အပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးသို့မဟုတျ, လုပ်ငန်းခွင်ပညာသင်နှစ်, ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးဖြည့်ဆည်းရန်မျှော်လင့်အခါအပြုအမူအတွက်ပါဝငျင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (4) မကြာခဏမှပြန်လည်ထူထောင်, အပြုအမူ (5) ကအမူအကျင့်များအတွက်လိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်သုံးစွဲအချိန်အများကြီးကိုရပ်တန့် တာဝန်ဝတ္တရား (6) အရေးကြီးသောလူမှုရေး, လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများအပြုအမူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားသော persistent သို့မဟုတ်မှုများထပ်တလဲလဲလူမှုရေး, ဘဏ္ဍာရေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိခြင်း၏အသိပညာသော်လည်းအပြုအမူကြောင့်အပြုအမူများ (7) ဆက်လက်တက်ပေးထားသောသို့မဟုတ်လျှော့ချ (8) သည်းခံစိတ်: အလိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွား EFF အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာအပြုအမူများ၏ပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ် Insight web studio ၏တူညီသောပြင်းထန်မှု (9) အညစ်ခြင်းအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းလျှင်၏ဆက်လက်အပြုအမူနှင့်အတူ။
(က F) ကိုနှောင့်အယှက်အချို့မှာရောဂါလက္ခဏာတွေကအနည်းဆုံး 1 တစ်လဆက်ရှိနေကြပါပြီ, ဒါမှမဟုတ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမဟုတ်တော့ကာလအတွင်းအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပါပြီ။
မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရိပ်လက္ခဏာအပြုအမူစွဲအတွက်ပျက်ကွက်ဖြစ်ကြသည်။ အမူအကျင့်စွဲ၏ရှေ့တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုမရှိခြင်းအဖြစ် psychopathologies ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
2007 ခုနှစ်တွင်တရုတ်ကွန်ပျူတာဂိမ်းအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်စတင်ခဲ့ပြီး: လက်ရှိဥပဒေများကိုနေ့စဉ်ဂိမ်းအသုံးပြုမှု3နာရီထက်ပိုပြီးတား။ 2006 ကနေဒေတာတွေကိုသုံးပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရ 210,000-6 နှစ်ပေါင်းအသက်အုပ်စုတွင် 19 ကလေးများထိခိုက်ခြင်းနှင့်ကုသမှုလိုအပ်နေဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းထားသည်။ သူတို့အားလိုအပ်နေကုသမှု 80% စိတ်ဆေးဝါးများလိုအပ်စေခြင်းငှါ, ဖြစ်ကောင်း 20-24% ဆေးရုံတင်ကုသရန်လိုအပ်သည်။ ပျမ်းမျှတောင်ကိုရီးယားအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားအကြောင်းကို 23 နာရီအပတ်တိုင်းဂိမ်းသုံးစွဲကတည်းကအခြား 1.2 သန်းစွဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ရန်နှင့်အခြေခံအကြံပေးခြင်းလိုအပ်ယုံကြည်နေကြသည်။ ကုသ, ကျောင်းထဲကနေထွက်ကျဆင်းနေတစ်ဦးချင်းစီ၏တိုးပွားလာအကြောင်းကိုကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အချိန်ဖြုန်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဒုက္ခအတွက်ရဖို့အလုပ်စိတ်မပူပါနဲ့။ ဇွန်လ 2007 ၏အဖြစ်, တောင်ကိုရီးယားအင်တာနက်စွဲများ၏ကုသမှု 1,043 တိုင်ပင်မှူးမတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီး 190 ဆေးရုံများနှင့်ကုသမှုစင်တာများကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဤအစွဲအတော်များများဟာဆိုက်ဘာဆက်ဆံရေးနှင့်ကျဘာသို့ရ။ အမေရိကန်လူဦးရေအကြားတွင်ထွက်သယ်ဆောင်လေ့လာမှုများအရ, ကလိင်စွဲ 3% အတွက် 3%, လေ့ကျင့်ခန်း-စွဲအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့် 6% အတွက်စျေးဝယ်စွဲစုစုပေါင်းလူဦးရေအကြားတွင်။ အိန္ဒိယမှာတော့တစ်ဦး ICMR ရန်ပုံငွေစစ်တမ်းဖော်ထုတ်အစားအသောက်စွဲလမ်း (1.6%; 2% ယောက်ျားနှင့် 1.2% အမျိုးသမီး), စျေးဝယ်စွဲ (4%; အထီး-3.2% နှင့်အမျိုးသမီး-4.8%), လိင်စွဲလမ်း (2%; 0.3% ယောက်ျားနှင့် 0.1% အမျိုးသမီး) နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစွဲ (5.6%; 7.5% အထီးနှင့်အ 3.8% အမျိုးသမီး) ။
မွန်ဘိုင်းမြို့အနှံ့ရှိအမျိုးမျိုးသောစည်းမျဉ်းအမျိုးမျိုးရှိသောကျောင်းသား ၉၈၇ ယောက်ပါ ၀ င်သောလေ့လာမှုကိုနမူနာယူပြီးအထူးပြုတည်ဆောက်ထားသည့် semi-structured proforma နှင့် The Internet စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း (IAT; Young, 987) ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့်ဆယ်ကျော်သက် ၉၈၇ ဦး အနက် ၆၈၁ (၆၈.၉%) သည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး ၃၀၆ (၃၁.၁%) သည်အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ၇၄.၅% သည်အလယ်အလတ်အသုံးပြုသူများဖြစ်ကြသည်။ လူငယ်၏မူလစံသတ်မှတ်ချက်အရ ၀.၇% သည်စွဲလမ်းသူများဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုတို့အတွက်ရမှတ်များစွာရှိသည်
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေးθ
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုစာရင်းθ - ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော
θ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစာရင်း
ထူထောင်အဖြေရှာတဲ့စံတစ်ခုမရှိခြင်းလည်းမရှိကတည်းကဤအကြေးခွံများတရားဝင်မှု၏အရေးပါမှုကိုသံသယဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြေးခွံထဲမှာမေးခွန်းတွေအများအပြားဟာအဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်လိုက်လျောပါဘူး။
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေးအများဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ရှေ့မှောက်တွင် gauging များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာစွဲလမ်း (အာရုံချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်အန္တရာယ်အကျိုးဆက်များ) ၏သော့ချက် features တွေနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သည်။ ဒါဟာ 10-1 ထံမှရသောရမှတ်တစ်4ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကိုပယ်ဖြတ်တန်ဖိုးကို 24 ဖြစ်ပါတယ်။
Pharmacological ကုသမှုကျိုးနွံခြင်းနှင့်ရေတိုရေရှည်အကျိုးရှိပါတယ်။ လက်ရှိကျွမ်းကျင်သူအမြင် pharmacotherapy နှင့် psychotherapy ပေါင်းစပ်အပြုအမူစွဲမဆိုမျိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။
θဆေးဝါးကုထုံးတွင် ၁။ Endocrinological agent များ - androgens နှင့်တူသော Medroxy progesterone acetate တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် testosterone ဟော်မုန်းဓာတ်ကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ဤသည် Paraphilias တွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုနှင့်ရန်လိုသောလိင်အပြုအမူများကိုလျော့နည်းစေသည် အခြားဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာပစ္စည်းများတွင် Cyproterone acetate၊ GNRH ၏ Analogues (leuprolide acetate) နှင့်အက်စ်အက်စ်အက်စ်၊ TCA၊ လီသီယမ်၊ ဤရွေ့ကားအေးဂျင့် 1-50% တစ် ဦး အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုနှုန်းရှိသည်။ ကျန်းမာသောအပြုအမူအတွက်မောင်းနှင်အားကိုလျှော့ချခြင်းမပြုဘဲအလွန်အကျွံလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်မောင်းနှင်မှုကိုလျော့ကျစေသည်။ တွဲဖက်လိင်အပြုအမူများအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်စွဲစွဲသူတစ် ဦး ၏လက်ခဏာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်တွန်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုကြိမ်နှုန်းနည်းစေပါသည်။
ဆိုက်ကိုဒိုင်းနမစ် psychotherapy, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ antecedents ၏အခန်းကဏ္ဍကို synthesize လက်ရှိစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, ဒုစရိုက်ဖြေလျော့ချနှင့်လူမှုရေးညှိနှိုင်းမှုတိုးတက်လာဖို့ရန်ကူညီပေးသည်။ တစ်ဦးတိုက်ပိတ်ကုသမှုအဖြစ်ဤအဘို့အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ တစ်ဦးကိုယ်ပိုင်အကူအညီနဲ့အုပ်စုလွှဲပြောင်းအောင်မြင်သောရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်အခြားအများဆုံးမွေးစားကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 12-ခြေလှမ်းများသို့ရှင်းပြသည်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမော်ဒယ်နှင့်ပူးတှဲပါသိမြင်-အမူအကျင့်များနှင့်လူမှုရေးသင်ယူမှုနည်းစနစ်လေ့အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတွင်အထူးပြုလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကုသမှုအစီအစဉ်များအတွက်အသုံးချနေကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ကုသမှုဤပြည့်စုံချဉ်းကပ်မှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမထုတ်ဝေဒေတာရှိပါတယ်။
Young ကပထမသုံးအခြေခံအားဖြင့်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများနေသောများ၏အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မခုနစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ, ဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားနည်းလမ်းများနည်းပညာစွဲပေါ်တွင်ဆောင်းပါးထဲမှာအသေးစိတ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီ။
Orzack နှင့် Orzack ကုသမှုနှစ်ခုမဟာဗျူဟာများအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းအများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုသည်အင်တာနက် applications များ, တစ်ဦးချင်းစီအော့ဖ်လိုင်း forprogressively တိုးပွားလာ Duration အဲ့ဒီအချိန်မှာသောအမူအကျင့် exercisesand ထိတွေ့မှုကုထုံးအကြောင်းကိုသိမြင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါဝင်သော 1) သိမှုအပြုအမူကုထုံး။ 2) လှုံ့ဆျောမှုစွမ်းရည်မြှင့်ကုထုံး: ဒါဟာစွဲနှင့်၎င်းတို့၏ကုသကုသမှုအစီအစဉ်များနှင့်သတ်မှတ်ထားမှီရည်မှန်းချက်များအပေါ်ပူးပေါင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာမဟုတ်ဘဲမဟုတ်တဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဆန်းသစ်စဉ်းစားသည်။
မျိုးစုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Multi-Level တိုင်ပင်အစီအစဉ် (MLC) များကဲ့သို့ကြားဝင်, လူမှုရေးအရည်အချင်းကိုသင်တန်း (ခေါ), ဖြေရှင်းချက်-အာရုံစူးစိုက်အကျဉ်းကုထုံး (SFBT), သိမှုကုထုံး (မှန် CT) နှင့်အမူအကျင့်များကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း Reality ကုထုံး (RT ကို) ရှိပါတယ် စှဲ။
မြီးကောင်ပေါက်များကအင်တာနက်ကိုတိုးမြှင့်ရရှိမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, သင်ကြားရေးနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့အတွက်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးထားသည်။ ပြောင်းပြန်ကလည်းအကြိမ်ကြိမ်အကျိုးကိုအားဖြည့်ထားတဲ့အမျိုးမျိုးသောအပြုအမူများပေါ်ပေါက်လာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတော်မူပြီ လှုံ့ဆျောမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ် circuitry စွဲ၏ရောဂါရှိသမျှတို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူစွဲ, အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအမြီးကောင်ပေါက်, လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှု၏အနိမ့်ဒီဂရီရှိသည်အကြံပြုအကငျြ့ပြဿနာများ, ဆိုးသွမ်းအပြုအမူများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုများတွင်တိုးနှင့်စိတ်ခံစားမှု Bond လျော့နည်းသွားညစ်ညမ်းသုတေသနကပါဝင်ပတ်သက်နေသည် စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူ။ လိင်စွဲလမ်း၏ကုသမှုသူတို့အများကြီးလက်ပေါ်တွင်ရောဂါကုသအတွေ့အကြုံကိုခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်များစွာသောယေဘုယျစွဲနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုလျစ်လျူရှုစေခြင်းငှါ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများရှိပါတယ်။ ကုသမှုရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာမှုများ၏နံပါတ်တစ်ချို့တဲ့လည်းမရှိသော်လည်း, ကအတူတူ psychotherapy နှင့်အတူ pharmacotherapy ပေါင်းစပ်သောဤလူနာတွေအတွက် relapse တားဆီးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုရှိကြောင်း။ မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
T က, Laier ကို C, အမှတ်တံဆိပ် M က, Hatch က L, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ Hajela R. အာရုံကြောသိပ္ပံ Love: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို [အငျတာနကျ]; ပြုမူနေ။ သိပ္ပံ။ 2015; 5388-433; Doi: 10.3390 / bs5030388 ။
Darshan က MS, Sathyanarayana Rao က TS, Manickam S က, Tandon တစ်ဦးကရမ်ဃ Dhat syndrome ရောဂါနှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲ၏တစ်ဦးအမှုအစီရင်ခံစာ။ အိန္ဒိယ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2014; 56: 385-7 ။
Alavi အက်စ်အက်စ်, Ferdosi M က, Jannatifard က F, Eslami က M, Alaghemandan H ကို, Setare အမ်အပြုအမူစွဲပစ္စည်းစွဲလမ်းသာရှိပြီးပြည်ပမှ: စိတ်ရောဂါ၏ပေးစာယူနှင့်စိတ်ဓာတ်မြင်ကွင်းများ။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်. 2012;3 (4):290-4.
Widyanto L Laura၊ Griffiths အမ် 'အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု' - ဝေဖန်ဆန်းစစ်ချက်။ Int J စိတ်ကျန်းမာရေးစွဲ။ 2006; 4: 31-51 ။
Dalal PK, အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ Basu ဃအနှစ်နှစ်ဆယ် ... ပိုနေမြဲကျားနေမြဲ Vadis? စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အိန္ဒိယဂျာနယ်။ 2016; 58 (1): 6-11 ။ Doi: 10.4103 / 0019-5545.174354 ။
Mitchell က P. အင်တာနက်စွဲ: စစ်မှန်သောရောဂါသို့မဟုတ်မဟုတ်လော ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet။ 2000; 355 (9204): 632
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများမထိခိုက်စေလျက်ရှိသည်ပေါလုမညျ P. Pornified ။ 1st ed ။ NewYork: ဇီးကွက်စာအုပ်; 2006 ။ 190-200
Griffiths M. အဘယ်ကြောင့် DSM-5 ၌အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုမဖြစ်သနည်း။ စွဲကျွမ်းကျင်သူများဘလော့; ၂၀၁၅ မတ်လ
Carnes PJ ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့်မလှူ: အသိအမှတ်ပြုမှု, ကုသမှု, နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ CNS Spectr ။ 2000;5(10): 63-72
Goodman အေစွဲ: ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်ဂယက်ရိုက်။ စွဲလမ်းမှု၏ဗြိတိန်ဂျာနယ်။ 1990; (85): 1403-8
Davis က RA ။ ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတစ်ဦးကသိမြင်မှု-အပြုအမူမော်ဒယ်, လူ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကွန်ပြူတာ။ 2001; 17: 187-95 ။
block JJ ။ DSM-V ကိုများအတွက်ကိစ္စများ: အင်တာနက်စွဲလမ်း။ နံနက် J ကို Psychiatry 2008 မတ်လ; 165 (3): 306-7 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp ။ 2007.07101556 ။
Chou က C, Condron L ကို, Belland JC ။ အင်တာနက်စွဲပေါ်တွင်သုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ ပညာရေးဆိုင်ရာစိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2005 ဒီဇင်ဘာ; 17 (4): 363-88 ။
Manoj Sharma က, VivekBenegal, Rao က T. အပြုအမူနှင့်နည်းပညာစွဲစစ်တမ်း။ ဘန်ဂလို: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့် neuroscience 2013 အမျိုးသား Institute မှ။
Goel: D, Subramanyam တစ်ဦးက, Kamath R. အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အိန္ဒိယဆယ်ကျော်သက်အတွက် psychopathology နှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့များ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အိန္ဒိယဂျာနယ်။ 2013; 55 (2): 140-143 ။ Doi: 10.4103 / 0019-5545.111451 ။
Kalichman SC, Rompa ဃရှာကြံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive Scales: ယုံကြည်စိတ်ချရ, တရားဝင်မှုနှင့် Per မြည်း behavior.J HIV ပိုးအန္တရာယ်ခန့်မှန်း။ 1995 ဒီဇင်ဘာ; 65 (3): 586-601
မီလ်တန်အယ်လ် W၊ ဖရက်ဒရစ်က M၊ Jon M၊ အဲရစ်ခ်၊ သောမတ်စ်၊ ဂ၊ ဂျက်ဖရီ T၊ Andrea A၊ အမ်းအိုလီရီ။ လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားများအတွက်မဖြစ်မနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကုသမှုတွင် Citalopram နှင့် Placebo နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်ဆမျက်စိကွယ်ခြင်း။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 2006; 67 (12): 1968-73
Carnes P. “ အချစ်” ဟုမခေါ်ပါနှင့်။ လိင်စွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ခြင်း။ နယူးယောက်: Bantam; 1991 ။
လူငယ်တို့, KS (1999) အင်တာနက်စွဲ: လက္ခဏာများ, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံမှု။ လက်တွေ့ Practice1999 အတွက်တီထွင်မှု; (17): 19-31 ။
computer.com စှဲအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လို Orzack, MH ။ dir ။ Ment ။ ကနျြးမာရေးအကြံပေး။ 1999; (9): 13-20 ။
Winkler တစ်ဦးက, Dorsing B, Rief W က, Shen Y ကို, Glombiewski ဂျေအေ။ အင်တာနက်စွဲကုသ: တစ် Meta-analysis သည်။ ClinPsycholRev2013; 33: 317-29